​सरकारले बाढी–पहिरो प्रभावितलाई त्रिपाल वितरण गर्ने
काठमाडौं । सरकारले बाढी–पहिरो प्रभावितलाई त्रिपाल वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समिति अन्तर्गतको आपूर्ति आश्रय तथा पुनर्स्थापना उपसमितिले यो निर्णय गरेको हो ।
उपसमितिका अनुसार उक्त प्रभावितलाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको गोदाममा रहेको त्रिपाल वितरण गरिनेछ । बुधबार शहरी विकास मन्त्रालयमा....
​बाढीपीडितलाई सबै मन्त्रीद्वारा एक महिनाको तलब दिने निर्णय
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसहित २७ मन्त्रीले बाढीपीडितलाई एक महिनाको तलब दिने निर्णय गरेका छन् । एक महिनाको तलब बापत १६ लाख ७५ हजार एक सय ९० रुपैयाँ बाढी प्रभावितलाई दिने निर्णय भएको छ ।
त्यसैगरी, कर्मचारीले समेत एक देखि पाँच दिनसम्मको तलब बाढी प्रभावितलाई दिने....
​प्रदेश र संघीय चुनाव एकैपटक गर्न दलहरु सहमत
काठमाडौं । प्रमुख तीन दल प्रदेशसभा र संघीय संसदको चुनाव एकैपटक गर्न सहमत भएका छन् । दलहरु प्रदेशसभा र संघीय संसद्को चुनाव मंसिर दोस्रो साताभित्र एकैपटक गर्न सहमत भएका हुन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको कांग्रेस, एमाले र माओवादी शीर्ष नेताहरुको बैठकमा प्रदेशसभा र संघीय....
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको म्याद १५ दिन थप
इटहरी । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको म्यादको आज अन्तिम दिन सरकारले १५ दिनका लागि थप गरेको छ । आज सकिने म्यादमा प्रतिवेदन तयार नभएकाले म्याद थप गरिएको हो ।आयोगले काम पूरा गर्न बाँकी रहेको भन्दै आग्रह गरेकाले समयावधि थप गरिएको सुचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले....
​बराललाई काम नगर्न सर्वोच्चले दियो आदेश
इटहरी । प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष भवानी बराललाई तत्काल काम नगर्न/नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्त भएलगत्तै फेसबुकका टिप्पणी र स्टाटसले गर्दा आलोचित हुँदै आएका थिएक ।
बराल निर्वाचन संहिता लागू भैसकेपश्चात अध्यक्ष पदमा नियुक्ती गरिएको भन्दै अधिबक्ता....
प्रहरीमा एक हजार १७२ को दरबन्दी खुल्यो
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले विभिन्न पदमा भर्ना खुलाएको छ । मंगलबार एक सूचना प्रकाशन गर्दै नेपाल प्रहरीले विभिन्न पदमा गरी १ हजार १ सय ७२ जना जनशक्ति माग गरेको छ । ९१ जना प्रहरी निरिक्षकको माग गरिएको छ । ९१ जनामध्ये ४९ जना खुल्ला तर्फबाट....
​डा. केसीले सम्झौताविनै आमरण अनसन तोड्ने
काठमाडौं । चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको लागि अनसनरत डा. गोविन्द केसीले विना सम्झौता नै आमरण अनसन तोड्ने तयारी गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा विधेयक बाहेकका अधिकांश माग सम्बोधन भएको अवस्थामा आमरण अनसन तोड्न लागेृका हुन् ।
डा. केसीले २३ दिनदेखि जारी अनसन तोड्नुअघि सरकारले केही....
​बिराटनगर र लुक्ला एयरपोर्ट अझै खुलेन
काठमाडौं । बाढीका कारण जलमग्न भएको बिराटनगर एयरपोर्टबाहेक तराईका अन्य सबै विमानस्थलमा अहिले उडान सुचारु भइसकेको छ ।
बिराटनगर एयरपोर्टमा हिलो पन्छाउने काम भइरहेकाले केहि दिन पछि मात्र उडान सुरु गर्ने त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलले जानएको छ । लुक्ला र बिराटनगरमा मात्रै उडान हुन नसकेको....
​किन रोए डा. केसी ?
काठमाडौं । बाढीपहिरोबाट देशभर ठूलो जनधनको क्षति भएको खबर सुनेपछि डा. गोविन्द केसी अचानक डाँको छाडेर रोएका छन् ।
देशविदेशमा आइपर्ने जस्तोसुकै मानवीय विपत्तिमा पुगेर उनले निःशुल्क उपचार तथा राहत वितरण गर्दै आएका थिए । तर, आफु अनशन बसेकै बेला देशमा यस्तो विपद् आएको....
​बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बैंकिङ कारोबार बन्द
काठमाडौं । बाढीका कारण तराईका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बैंकिङ कारोबार बन्द भएको छ ।
बाढीका कारण विराटनगरदेखि कञ्चनपुरसम्मका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारोबार बन्द गरेका हुन् । यी क्षेत्रमा आइतबारदेखि नै बैकिङ सेवा ठप्प छ ।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिलकेशरी....